mairie-antananarivo – Fihaonana tamin’ny sefo fokontany sy ny kaominina (boriboritany voalohany)
Fihaonana tamin’ny sefo fokontany sy ny kaominina (boriboritany voalohany)
auteur 17 febroary 2017
Hisy ny fiarahamiasa akaiky eo amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny Sefo fokontany ny Boriboritany voalohany. Eo koa ny fampafantarana izay nataon’ny Kaominina ny lalana maro amin’ny fiarahamiasa eo amin’ny Sefo Fokontany sy ny Kaominina. Ka manambara izany indrindra ny « Loi 2015 du 1er avril » sy ny « Decret N° 2009-890 » izay milaza ny andraikitra sy ny fandaminana eo anivon’ny Fokontany izay voalaza ao amin’ny « Article : 14,15,16,17,18,19 ».
Araka izany indrindra dia nisy fihaonana teo amin’ny roa tonta izay nitontosaina tao amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely androany maraina 17 febroary 2017 niaraka amin’ny mpitantana maro teo amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra; ny Tanjona amin’izany moa dia ny fampandrosoana ny Tanàna sy fanarahamaso ireo tsy manara-dalàna eny anivon’ny Fokontany sy ireo zava misy rehetra ; amin’ny alalany fiarahamiasa eo amin’ny Sefo Fokontany : ohatra amin’izany ireo fanorenana tsy ara-dalàna, fijerena ireo 4 mi mimparitaka, fanentanana ny fanadiovana eny anivon’ny Fonkotany, fampandrenesana ny BMH rehefa misy ny voina sy ny otrik’aretina mimparitaka na ahiana ary fanaovana fampandrenesana raha misy zavatra atahorana mety hirotsaka sns.
Noho izany dia nampandraisana andraikitra ny Sefo Fonkotany rehetra amin’ny fampilazana ny Delege ny Boriboritany sy ny kaominina amin’ny fampafantarana ny zava misy rehetra eny amin’ny Fokontany. Marihana fa tsy miala maina ny Sefo Fokontany amin’ny fiarahamiasa miaraka amin’ny kaominina fa misy « indemnité» ho azy ireo arakakaraka ny ezaka izay vitany.